June 2011 ~ ကိုစောဂျက်
[Hidden Object Game] Murder, She Wrote
19:38 Ko Saw 1 comment
30/ June/ 2011
ဒီဂိမ်းကတော့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို မှန်ကန်အောင် ရွေးချယ်ရတဲ့ ဂိမ်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ပထမဆုံး အခန်းထဲက အင်္ဂလိပ် တစ်ပိုင်းတစ်စတွေကို လိုက်ရှာပြီး ဘေနားက ကွက်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြည့်အောင်ဖြည့်ရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဘေနားက ဖော်ပြထားတဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို မှန်ကန်အောင် လိုက်ပြီး ရှာဖွေပေးရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ကိုယ်မသိသေတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ပိုမိုသိလာစေပါမယ်။ သူလည်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင် ကစားရတဲ့ ဂိမ်းပါပဲ။ ကစားချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလောင်ဆွဲလိုက်ပါ။
[Action Game] Jungle Racers 2010
19:25 Ko Saw No comments
ပြိုင်ကားဂိမ်းကစားချင်သူများ အတွက် Jungle Racers 2010 ဂိမ်းပါ။ သူက တောကလမ်းလမ်းကြမ်းတွေ မှာ မောင်းရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တခြားကားဂိမ်းတွေနဲ့ တမူကွဲပြားနေပါတယ်။တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ကစားရတဲ့ ဂိမ်းမျိုးပါပဲ။ ကစားချင်တဲ့ သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလောင်ဆွဲလိုက်ပါ။
* CPU Pentium 1000 MHz or higher
* Video 64MB
Jungle Racers 2010
18:27 Ko Saw No comments
အွန်းလိုင်း ချက်တင်သမားတွေအတွက် Cyberlink.YouCam.v3.0 ပါ။ အားလုံးသိပြီးသာ ဖြစ်မှာပါ။ မရှိသေးသူများ သုံးလိုရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာ ကီးပါပါတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလောင်းဆွဲလိုက်ပါ။
15:20 Ko Saw No comments
28/ June/ 2011
Adobe PageMaker 7.0 နေရာမှာ အစားထိုး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဆော့်ဝဲက Adobe InDesign.ပါ။ PageMaker ထက် အသုံးပြုရတာ ပိုမိုလွယ်ကူရှင်းလင်းပါတယ်။ အသုံးမပြုတတ်သေးသူအတွက်ကတော့ ရှင်းထွေးပေ့မယ် သုံးတတ်တဲ့ သူတွေအတွက် PageMaker ထက် အကြိုက်တွေကြပါတယ်။ တွေ့ရ သလောက်တော့ မြန်မာတွေက PageMaker ကို အသုံးပြုနေကြဆဲပါပဲ။ InDesign ကို အသုံးပြုသူ နည်းနေပါသေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော InDesign ကို စမ်းပြီး အသုံးပြုချင်သူများနဲ့ အလိုရှိသူများ အတွက် ကျွနတော် Adobe InDesign.CS5 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Portable ပါပဲ။ တစ်ခါတည်း Run ပြီး သုံးရုံပါပဲ။ 200.MB နီးပါးရှိပါတယ်။ ဖိုင့်က ၂ ဖိုင့်ခွဲပြီးတင်ထားပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ။
ဖိုင့် ၁ ။ ဖိုင့် ၂
10:49 Ko Saw No comments
28 / June / 2011
Adobe Flash Professional CS5 ကို ခုမှ တင်ပေးဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ အလုပ်တွေ ရူပ်နေလို့ မတင်ပေးဖြစ်တာပါ။ ဒီဟာလေးက Portable ပါ။ Portable ဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့။ စွမ်းဆောင်မှုအပြည့် ပေးနိုင်ပါတယ်။ 242.MB ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းလောင့်လင့်က အောက်မှာပါ။ ၃ ဖိုင့်ခွဲတင်ထားပါတယ်။
15:04 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ iScreenRecorder ပါ။ ကိုယ် ကွန်ပြုတာမှာ ကိုယ်လုပ်နေသမျှကို ရုပ်/သံ တွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး ဗွီဒီယို ဖိုင့်နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရတဲ့ ဆော့်ဝဲပါ။ ကွန်ပြုတာ ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေကို ဒီဆော်လ်ဝဲနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက် ပိုပြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။ serial number အပြည့်အစုံ ပါပါတယ်။2.MB ပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
14:39 Ko Saw No comments
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် အမြဲတမ်း ကစားလေ့ရှိတဲ့ Big City Adventure - San Francisco games ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းက english စာ ဝေါဟာရတွေကို ပိုပြီး သိလာစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ စကားလုံးတွေ အများကြီးနဲ့ ကစားရတဲ့ အတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဂိမ်းနဲ့ ချက်တင်ကို ဝါသနာကြီးကြတယ်။ ဂိမ်းစွဲတဲ့ လူတွေဆိုရင် နေ့မသိ၊ ညမသိ ကစားနေကြတာ အချိန်တွေ အကျိုးမဲ့ကုန်စေပါတယ်။ ဒီ Big City Adventure - San Francisco ဂိမ်းနဲ့တာ အဲလို ကစားနိုင်မယ် ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာ ပါရဂူကြီးတော့တောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ထင်တယ်။ ဒီဂိမ်းမှာ အဆင့်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ ရထားပုံလေးကို ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကစားရုံပါပဲ။ တစ်ခါကစာရင် တစ်ခါ ရထားပုံလေးကို ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကစားရပါတယ်။ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင့်နေရာကို မှတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အားလုံးကို ကစားကြည်စေချင်ပါတယ်။ 21.MB ပဲရှိပါတယ်။
ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော် ကစားနည်းက မသိတဲ့ စကားလုံးတွေဆိုရင် ရှိသမျှ ပုံတွေကို သောင့်ရမ်းလိုက်နှိပ်ပြီး ကစားလိုက်ပါတယ်။ )
ဒါကတော့ Best Portable Software 100 in 1 ပါ။ အားလုံး အလန်းတွေ ကြီးပါပဲ၊၊ ကွန်ပြုတာ HDD နည်းတဲ့ သူတွေ အတွက် အသုံးပိုဝင်ပါတယ်။သူမှာ ပါတာတွေကို အောက်မှာ ကြည်လိုက်ပါ။750.MB ရှိပါတယ်။ ဖိုင့် ၈ ဖိုင့် ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ အားလုံး downloads လုပ်ပြီးရင် vcd တစ်ချပ် ဘန်းပြီးတော့သာ သိမ်းထားလိုက်။ အသုံးဝင်လာ လိုက်မယ်။
Teleport Ultra 1.38L.ru Portable
TopHipHop 100 . Font
23:50 Ko Saw3comments
ဒါကတော့ TopHipHop 100 . Font ဖောင့်တွေပါ။ ဖောင့် ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ စာစီစာရိုက်သမားတွေ၊ ဒီဇိုင်နာ သမားတွေ သုံးတဲ့ ဖောင့်တွေပါ။ အားလုံး အလန်းဇယားတွေကြီးပါပဲ။ ဘယ်မှာ သွင်းရမလဲ မသိတဲ့သူတွေ ကတော့ ... ဖိုင့်ဖြည့်ပြီးရင် copy ကူးပြီးရင် start >control panel >fonts ကို သွားပြီး paste ချလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သုံးလိုရပါပြီး။ အလိုရှိသူများ ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
14:05 Ko Saw No comments
20/ June/ 2011
Internet Download Manager ကိုကြိုက်တဲ့ လူတွေများပါတယ်။ ဒါကတော့ IDM 6.06 Beta Build7ပါ။ IDM ကို install သွင်းပြီးရင် old patch ဖိုင့်ထဲက ပါတဲ့ ဖိုင့်တွေနဲ့PATCHaကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Internet Download Manager မှာ path ချလိုက်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း virus စစ်တဲ့ softwares တွေကိုတော့ ခဏပိတ်ထားပေးပါ။ 4.MB ပဲရှိပါတယ်။ downloads links က ဒီမှာပါ။
16:59 Ko Saw2comments
Window တင်ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ Application တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဘယ်သူ ဆိုဒ်ကတင်ထားလဲ ဆိုတာတွေ ကျွန်တော်မသိတဲ့ အတွက် လင့်မပေးတော့ပါဘူး။ တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ တက်နိုင်ရင် အားလုံး downloads ပြီး dvd ခွေနဲ့ သိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သိမ်းထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မကြာခဏ ကျွန်တော်လည်း windows တွေ တင်နေရလို့ပါ။ ကိုယ် လိုအပ်တဲ့ Softwares တွေကို အောက်မှာ ကြည်ပြီး ဆွဲသွားလိုက်ပါ။ မရှိသေးသူများကို ပြောတာပါ။
16:43 Ko Saw No comments
အားလုံးသိပြီးသာ Nero 8 ပါ။ ကွန်ပြုတာ တစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ် Softwares တစ်မျိုးပါ။ အလိုရှိသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ Install သွင်းတဲ့ အခါကျ၇င် သူမှာပါပြီးသာ Serial number ကို ဖျက်ပြီး Notepad ဖိုင့်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ Serial number ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အမြဲတမ်း အသုံးပြုလို ရပါပြီး၊၊ 179.MB ပဲရှိပါတယ်။ ဖိုင့် ၂ ဖိုင့်ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
11:55 Ko Saw No comments
Portable AutoCAD သုံးချင်သူများ အတွက် Portable AutoCAD 2010 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 239.MB ပဲ ရှိပါတယ်။ mediafire ကနေ ဖိုင့် ၃ ဖိုင့်ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ ဖိုင့် ဖြည့်တဲ့ အခါကျ၇င် Autodesk AutoCAD 2010.part1.rar ဖိုင့်ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး Ehtract Here ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ AutoCAD နာမည်နဲ့ Folder ဖိုင့် တစ်ဖိုင့် ရလာပါလိုက်မယ်။ Folder ဖိုင့်ကို ဖွင့်ပြီး Portable AutoCAD 2010 ကို mouse နဲ့ ၂ ချက်နှိပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီး။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
1 က ဒီမှာ
2 က ဒီမှာ
3 က ဒီမှာ
iPhone (iOS 4.1) အတွက် မြန်မာ လက်ကွက် ထည့်သွင်းနည်း
20:00 Ko Saw No comments
အချိန်အတော်ကြာကြာ စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ စာရိုက်စနစ် Keyboard ကို iOS 4.1 အတွက်ထွက်ရှိလာပါပြီ ကိုစေတန် ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့မရှေးမနှောင်းလေးမှာ ကိုဝေလင်းဖြိုး ကနေပြီးတော့ iPhone(iOS4.1) တွေအတွက် မြန်မာလက်ကွက်စနစ် (zawgyi Keyboard) ကို ရေးသားပေးခဲ့ပါပြီ... ကိုစေတန် နှင့် ကိုဝေလင်းဖြိုးကို အထူးလေးစား ကျေးဇူးတင်လိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ...
iOS 4.2 အတွက် ကတော့ ကိုဝေလင်းဖြိုး ရေးနေဆဲလို့သိရပါတယ်....
လောလောဆယ် မှာတော့ ကိုစေတန် နှင့် ကိုဝေလင်းဖြိုး တို့ ရဲ့Zawgyi keyboard စနစ် နှစ်ခုရှိနေပါတယ် အဲဒီအထဲကမှ ကိုဝေလင်းဖြိုးရဲ့စနစ်ကို တင်ပြပေးပါရစေ...
ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တော့ ကိုစေတန် က zawgyi keyboard စနစ် project ကို သူ့ ရဲ့Zawgyi Keyboard iOS 4.1(alpa) ရေးလို့ အပြီးမှာ ဆက်လက်မရေးတော့ဘူးလို့ အတိလင်းပြောကြားသွားခဲ့တဲ့ အတွက် နောက်ပိုင်း တွေမှာ အဆင်ပြေစေချင်တဲ့ သဘောသက်သက်ပါ မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက်ကို iPhone မှာ စတင် ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ကိုစေတန်ကို အစဉ်လေးစားလျှက်ပါ...
၂) သင်မှာ ယခင်က zawgyi Font သွင်းပြီးသား ဖြစ်ပါက
Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ Install လုပ်ပြီးပါက အောက်ပါပုံ အတိုင်းတွေ့ ရပါမယ်
၂) Zawgyi Font iOS ( only for iOS >= 3.2) နှင့် Zawgyi Keyboard iOS (only for iOS 4.1) နှစ်မျိုးစလုံးကို တစ်ခုချင်း Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ
zawgyi keyboard ကိုလည်း PC မှာ Download လုပ်ပြီး၊ ရလာသော Zip file ကို ဖြည်ထားပါ (myankey) Folder တစ်ခုနှင့် KeyboardTitles.strings (File) တစ်ခု ရပါလိမ့်မည်။
၂) iPhone ကို PC နှင့် ချိပ်ဆက်ပါ၊ iTune တက်လာပါက ပိတ်ပစ်ပါ
၃) iPhone icon ကို Select နှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရမည်
zawgyi keyboard (iOS4.1) Install လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပါပြီ..
"Myanmar-Zawgyi" နှင့် "Myanmar-Alphabetical-Order" ဆိုပြီးတက်လာရင် "Myanmar-Zawgyi" ကိုသာရွေးပေးလိုက်ပါ....
ကဲ.. ရိုက်ချင်သလောက်သာ ရိုက်ကြပေတော့ဗျို့.....
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပိုစ့်ကို ကိုမိုးသိကြား ကနေ ကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါ။ ကိုမိုးသိကြား ဆိုဒ် ကို သွားလည်ချင်ရင် ဒီမှာပါ၊ မသိသေးသူများ အတွက်ပါ။
19:29 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ revouninstaller-portable ပါ။ ကိုယ် စက်ထဲမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ Softwares တွေကို ပြန်ဖြုတ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ Softwares ပါ။ ပုံမှန်ပါအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တွေတင်ထားတဲ့ Softwares ကို Start >All Programs ကနေသွားပြီး ပြန်ဖြုတ်တက်သလို Control Panel ကနေ ဝင်ပြီး သွားဖြုတ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါသွားဖြုတ်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ တင်ထားတဲ့ Softwares တွေ မရှိတော့ပေမယ့် အကြွင်းအကျန်လေးတွေ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ အခု revouninstaller-portable နဲ့ ဖြုတ်ရင် တော့ ဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး။ စက်လဲ သန့်ရှင်းပါတယ်။ portable ဆိုပေမယ့် သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။ portable ဆိုတာက တစ်ခါသုံးရင် တစ်ခါ install လုပ်ပြီး သုံးတာကို ပြောတာပါ။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
15:06 Ko Saw No comments
Portable တွေ တစ်ထောင်နီးပါး လောက် ၇ှိတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ညွန်ပြချင်ပါတယ်။ သူဆိုဒ်က ဒီမှာပါ သွားရောက် လေ့လာပြီး downloads ဆွဲပြီး သိမ်းထားလို့ ရပါတယ်။ အသုံးလိုတဲ့ သူတွေ downloads ဆွဲပြီး သုံးလိုရအောင် ဒီပိုစ့်ကို တင်လိုက်တာပါ။ မသိသေးတဲ့သူကို ပြောပြပေးတာပါ။
13:59 Ko Saw No comments
ပိတ်ထားတဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တွေကို ကျော်ခွချင်တဲ့ အခါကျရင် သုံးတဲ့ Proxy Softwares တစ်မျိုးပဲ။ ဒီ Proxy Switcher PRO v3.9.0.4059 မှာ သူကို အသုံးပြုနည်းပါ flash Video နဲ့ သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ အထဲမှာ Serial number ထည့်ထားပါတယ်။ 3.MB လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တယ် ဆိုရင်' ဒီမှာ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
18:11 Ko Saw No comments
မနေ့က ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ IT city (ပန်ထစ်) မှာ ကွန်ပြုတာ တစ်လုံးသွားဝယ်ရင် Adobe Creative Suite5Master Collection ကို တွေ့တာနဲ့ ဘတ် ၅၀၀ နဲ့ ဝယ်လာလိုက်တယ်။ တစ်ခါမှ Softwares ခွေ မဝယ်ဖူးပါဘူး။ အင်တာနက်မှာ ဟိုရှာရ ဒီရှာရ ကို ပျင်းနေတာနဲ့ ပြီးတော့ ဒေါင်းလောင်းဆွဲရင် အချိန်ကုန်နေမယ် ဆိုပြီး ဝယ်လာလိုက်တာပါ။ ဆိုင် ကို ပြန်ရောက်ပြီး install သွင်းတော့ Serial number တောင်းတာနဲ့ ဝယ်လာတဲ့ ခွေမှာ ပါလာတဲ့ number ကို ပေးလိုက်တယ်။ မှားနေတယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုမှ သွင်းလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အင်တာနက်မှာပဲ Serial number ကို ရှာပြီး ပေးလိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဘော်ဒါတွေ အလိုရှိတယ် ဆိုရင်လည်း အောက်မှာ Serial number ကို ယူလိုက်ပါ။ Softwares ကို အလိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတဲ့ ဆိုဒ်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် မတင်ပေးတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ သူက 8G နီးပါးလောက် ရှိနေလိုပါ။ Adobe Creative Suite5Master Collection မှာ ပါတာတွေက အများကြီးပါပဲ။ ခွေမှာကြည်လိုက်ပါ။
Nero7Lite 7.5.9.0 + Nero7Micro 7.5.9
16:31 Ko Saw2comments
ဒါကတော့ Nero7ပါ။ နောက်ဆုံး Version မဟုတ်ပေးမယ် သုံးလိုကောင်းပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Nero 8 တွေ Nero9တွေ Nro 10 တွေ တင်ပေးပါမယ်။151.MB ရှိပါတယ်။ ဖိုင် ၂ ဖိုင် ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။ အထဲမှာ keygen နဲ့ Serial numberပါပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
16:26 Ko Saw No comments
လူတိုင်းသိပြီးသား Adobe PageMaker 7.0 Software ပါ။ Adobe PageMaker က 7.0 ကနေပြီး မတက်တော့ပါဘူး။ သူအစား Adobe InDesign အဖြစ် ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီး။ cs5 အထိတောင် ရောက်နေပါပြီး။ ဘာပဲ ပြောပြော PageMaker ကို သုံးနေတဲ့ လူတွေ အများစုကတော့ PageMaker မှ PageMaker ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ 123.MB ရှိပါတယ်။ ဖိုင့် ၂ ခု ခွဲပြီး တင်ထားပါတယ်။ အထဲမှာလည်း Serial number ပါပါတယ်။
Serial number 1039-1121-2998-7586-7388-7545
11:38 Ko Saw 1 comment
ဒါကတော့ Adobe Acrobat Professional 8.1 ပါ။ 255.MB ရှိပါတယ်။ ဖိုင့် ၃ ဖိုင့် ခွဲပြီးတင်ထားပေးပါတယ်။ အထဲမှာ Keygen ပါတစ်ခါထဲထည့်ထားပါတယ်။အလိုရှိသူများ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒေါင်းလောင့်လင့်က အောက်မှာပါ။
15:34 Ko Saw3comments
11/ june / 2011
Microsoft Office 2007 ကို အလိုရှိသူများ သုံးနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Office Word 2007 စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင့် ၆ ဖိုင့် နဲ့ တင်ထားပေးပါတယ်။ Serialnumber ကိုပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ သူ Serialnumber ကတော့ KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8 ဖြစ်ပါတယ်။
15:19 Ko Saw No comments
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က ကျွန်တော်ကို cyberlink powerdvd 10 တောင် ထွက်နေပြီး ဘာလို cyberlink powerdvd 8 ကို တင်ထားတာလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတာတွေကို Serial number ပါတာတွေ Key file ပါတာတွေကို အဓိက ထားပြီး တင်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သုံးတဲ့လူတွေ အဆင်ပြေဖို့ ကို အဓိက ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ cyberlink powerdvd 10 ရှိပါတယ်။ Key မရှိသေးလို့ မတင်သေးတာပါ။ ခုတော့ ရှိသွားပါပြီး ။ ဒါတွေက CyberLink PowerDVD 10 ရဲ့ key number တွေပါ။
နောက်ဆုံးပေါ်တွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ CyberLink PowerDVD 10 ကို အောက်မှာ downloads လုပ်နိုင်ပါတယ်။ file ထဲမှာလည်း ထည့်ထားပါတယ်။ links ၂ ခု ကနေ တင်ထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေလည်း downloads လုပ်နိုင်ပါတယ်။
downloads link 1 ဒီမှာပါ
downloads link2ဒီမှာပါ
00:29 Ko Saw No comments
မြန်မာစာ လက်ကွက် လေ့ကျင်လိုသူများ အတွက် English Myanmar Typing Tutor ပါ။ English စာကိုလည်း လေ့ကျင်လိုရပါတယ်။ CE Myanmar font နဲ့ Win font ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖောင့်တွေ လိုအပ်တယ် ဆိုရင် ဒီပို့စ် မှာ ဖတ်ပြီး downloads ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ သူလက်ကွက်တွေက Zawgyi လက်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ဂိမ်းကစားပြီး လေ့ကျင်လည်း ရပါတယ်။ မူရင်ဆိုဒ်မှာ သွား ကြည်ပြီး ဒေါင်းလည်းရပါတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
00:14 Ko Saw3comments
လူသုံး အများဆုံး မြန်မာ ဖောင့် အမျိုးပေါင်း ၆၀ ကို လိုချင်တဲ့ လူတွေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ zawgyi font / win fonts/ စတဲ့ ဖောင့် တွေ အားလုံးပါပါတယ်။ 2.MB ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ Zawgyi_Keyboard ကို တော့ လိုအပ်ရင် ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
Macromedia Flash.Professional.v 8.0
23:46 Ko Saw No comments
ဒါက Macromedia Flash.Professional.v8.0 ပါ။ အသုံးလိုတဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ။ 106.MB ရှိပါတယ်။ တစ်ဖိုင့်ထဲ တင်ထားပါတယ်။ အထဲမှာ Key file ထည့်ထားပါတယ်။ ခုတော့ Link တစ်ခုထဲကပဲ တင်နိုင်သေးတယ်။ နောက် ဆိုရင် links နှစ်ခု သုံးခု လောက် တင်ပေးပါတယ်။ ခုတော့ MediaFire ကနေပဲ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
Product Flash 8
Product Fireworks 8
Product Dreamweaver 8
23:05 Ko Saw No comments
Adobe Illustrator CS3 ပါ။
ဒီ Adobe Illustrator CS3 လည်းပဲ windows xp နဲ့သာ သင့်တော်ပါတယ်။ ဘာ key မှ မလိုပါဘူး။ အမြဲတမ်း သုံးလိုရပါတယ်။ 87.MB ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေကတော့ Photoshop ထက် Adobe Illustrator ကို ပိုပြီး ကြိုက်ကြပါတယ်။ လိုချင်ရင်တော် ထုံးစံ အတိုင်း downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
21:52 Ko Saw No comments
ဒီ Adobe Photoshop CS3 က windows xp မှာသာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ key မလို့ပါဘူး။ တစ်ခါထဲ install လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။ အမြဲတမ်း သုံးလိုရပါတယ်။ ဘာ ပြသာနာ မှမရှိပါဘူး။ 55.2 MB ပဲ ရှိပါတယ်။ သုံးလိုလည်း ကောင်းပါတယ်။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
21:24 Ko Saw No comments
ACDSee.Pro ကို လူတိုင်းသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ကွန်ပြုတာ တစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ် photo software
တစ်မျိုးပါ။ ACDSee.Pro.v8.0.67 က ဓါတ်ပုံတွေကို အလွယ်တကူ ပြုပြင်လို့ ရပါတယ်။ တစ်ခြားဟာတွေပါ သုံးလိုရပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်စွဲသုံး software တစ်မျိုးပါ။ Serial Key ပါ ထည့်ထားပါတယ်။ Hotfile ကနေတင်ထားပေးပါတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
18:35 Ko Saw No comments
Cyberlink.PowerDVD.Ultra.v8.0 ပါ။ နောက်ဆုံးထုတ် Version မဟုတ်ပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ မကွာပါဘူး။
serial key ပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။
ဘော်ဒါတွေ လိုချင်ရင် အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ .mediafire မှာပဲ တင်ထားပေးပါတယ်။
ဒီမှာပါ။ downloads links
iPhone (iOS 4.1) အတွက် မြန်မာ လက်ကွက် ထည့်သွင်းနည...
gtalk / vzochat နဲ့ skype